Ny fampidirana fohy ny plunger - Nantong ANT milina Co., Ltd
Ny fampidirana fohy ny plunger
A plunger paompy dia karazana paompy famindram-ponenana tsara izay avo-tsindry tombo-kase dia amin'ny toerana sy malamalama cylindrical plunger tsary amin'ny alalan'ny tombo-kase. Izany no mahatonga azy ireo tsy mitovy amin'ny piston paompy ka mamela azy ireo mba ho ampiasaina amin'ny tsindry ambony. Io karazana paompy Matetika no ampiasaina mba hamindra ben'ny tanàna sy ny orinasa maloto.
Rotary piston sy ny plunger paompy mampiasa crank rafitra mba mamorona reciprocating mihetsika miaraka amin'ny mpiray, izay manorina ny fanerena avy eo amin'ny varingarina, na miasa barika mba manery mandatsa-dranomaso, na ranon-javatra amin'ny alalan'ny paompy. Tombo-kase dia anisan'ny piston paompy sy ny plunger paompy mba hampisaraka ny hery tsiranoka avy amin'ny haino aman-jery izay efa pumped. A Hala-boxor fonosana no ampiasaina mba asio tombo-kase ny mpiray eo amin'ny fanaka izay misy ny haino aman-jery dia nafindra sy ny plunger na piston.
Plunger mitempo manosika ny singa fitaovana no voafidy ho anaovan'ireo sy hifandray amin'ny karazana haino aman-jery. Anisan'ny singa fototra fitaovana varahina, varahina, steel,inôksa, iron, nivy firaka, na fitaovana hafa
Manaraka: Fikojakojana ny Vibrator